Ho an’ny filoham-pirenena, nivalana ny fiventesana ny hiram-pirenen’I Trinidad & Tobago · Global Voices teny Malagasy
Ho an'ny filoham-pirenena, nivalana ny fiventesana ny hiram-pirenen'I Trinidad & Tobago
"Amin'ny zavakanto, tsy maintsy sokafana ny varavaran'ny famoronana..."
Voadika ny 18 Oktobra 2019 6:14 GMT
Pikantsary nalaina avy amin'ny horonantsary YouTube fiventesana ny hiram-pirenen'i Trinidad sy Tobago, navoakan'i JR Videos.
Vao avy nampiantrano ny Fetiben'ny Zavakanto ao Karaiba i Trinidad sy Tobago, izay malaza kokoa amin'ny fiantsoina azy hoe Carifesta, natao tamin'ny toerana samihafa nanerana ilay repoblika kambana, ny 16 hatramin'ny faha 25 Aogositra 2019.
Ny taona 1972, noforonina ilay hetsika ho fandraisana anjara amin'ny fampivondronana ny mponina ao amin'ny faritra amin'ny alàlan'ny zavakanto sy ny kolontsaina, ny mozika ary ny literatiora, ny sarimihetsika, ny asa tanana, ny dihy ary ny fampirantiana vakoka. Nandray anjara tamin-kafanampo tamin'ilay hetsika ny olona, fa ny teboka lehibe indrindra dia ny fandefasana ny hiram-pirenen'i Trinidad sy Tobago nandritra ny lanonam-pamaranana.
Fotoana fohy taorian'izany, namoaka fanambaràna tanaty haino aman-jery ny Biraon'ny filoha, izay tsy nankasitraka ny fanovàna azy. Nilaza ny filoha Paula Mae Weekes fa :
Nampahatsiahivina […] tamintsika teo anelanelan'ny 16 ka hatramin'ny 25 aogositra 2019, […] ireo zavatra mampiray antsika sy ireo zavatra afaka ho tanterahina, amin'ny alàlan'ny kolontsaina, ny fiarahamiasa misy eo amin'ny samy firenena. […]
Na izany aza, nisy feo nivalana tsy nifanaraka nandritra ilay lanonana famaranana, rehefa noventesina ny fanovàna iray tsy azo ekena natao tamin'ny hiram-pirenentsika. Tsy maintsy hiraina amin'ny mozika nanaovana azy tany am-boalohany ny hiram-pirenena ; tsy asiana fampidirana na coda atsofotsofoka na zavakanto hafa misy fahazoandàlana afaka alaina hanovàna azy. Vao mainka henjana io fandikandalàna io rehefa atao eny aminà lanonana ofisialy, tahaka ny lanonam-pamaranana ny CARIFESTA XIV.
Nanampy toy izao ilay Filoha :”Ny hiram-pirenentsika, toy ny sainam-pirenena sy ireo saritigetra, no maha firenena antsika ary tsy maintsy omena ny haja ambony indrindra amin'ny fotoana rehetra.” Noresahan’ny tranonkalan'ny kabinetran'ny Filoha ny momba ny sata mifehy tokony arahana amin'ny fanaovana ny hiram-pirenena izay nosoratan'i Patrick Castagne ny taona 1962, taona nahazoan'i Trinidad sy Tobago fahaleovantena nialany tamin'i Grande-Bretagne :
Tokony omena ny haja mendrika azy ny hiram-pirenena rehefa hiraina, ary tsy tokony ho raisina ho zavatra tsotsotra na amin'ny fotoana manahoana na manahoana. Na hoe tsy maintsy tendrena amin'ny feony tena izy aza izany, mety azo ovaina ihany ny lantom-peo, ny hafainganana ary ny gadona.
“Ny lantom-peo” dia afaka adika amin'ny haavo na haivan'ny feo, “Ny Hafainganana” dia miresaka momba ny fihazakazahan'ilay fiventesana azy, ary ny “gadona” dia manoritsoritra ny lantom-peo, ny hatsarany, ary ny hatanjaky ny feo avoaka.
Nizarazara be ihany ny fanehoankevitra tanaty tambajotra sosialy : Nisy ireo nilaza fa manao ny asany fotsiny ny filoha amin'ny fampahatsiahivana ny sata mifehy ny fanaovana ny hiram-pirenena; ny sasany — isan'izany ireo mpiangaly mozika — nino fa tsy mitondra fandrosoana ilay heviny.
Tanaty Facebook, ilay mpanakanto Denny Ablack no nanoratra fa :
…Amin'ny maha mpitendry mozika sy mpitahiry ny mozika ahy ao anaty tambajotra mozika T&T ahitàna mpikambana 5 000, dia lazaiko fa tsy tokony haka toerana ofisialy ,noho ny toerana misy azy, ny safidy ara-mozika manokana ananan'ireo manampahefana. Miaro ireo rahalahy ara-mozika amin'ny fiampangana azy ireo ho tsy manaja ny hiram-pirenena aho … diniho, mety tsy mahazatra izany fa dia tena hetsika mendri-panajana tokoa … tsy hoe tsy nisy fanajana ihany koa ny nilalaovana ireo karazana mozika talohany sy taorian'ilay hiram-pirenena… raha ny fivoakany. ara-drariny ny mitsikera raha tsy tianao ny nanovàna azy fa tsy tokony hosokajiana ho tsy fanajana ny zava-kinendriny […]
Hoy izy nanohy :
Raha lalaovina ambony takelaka [vy] ny hiram-pirenena, ohatra, dia tsy hanaraka ny fenitra na mivoana amin'izay niandohany izy, kanefa tsy hoe tsy misy fanajàna akory rehefa miala kely amin'ny tena izy […] Mba mangalà fotoana kely hijerena ny famerenana zavakanto iray any amin'ny firenena hafa. Ny hiram-pirenena atao any amin'ireny hetsika ara-panatanjahantena ireny, na tendrena izany na tsia. Amin'ny zavakanto, tsy maintsy sokafana fa tsy hidiana ny varavaran'ny famoronana…
Tao anaty tafatafa tanaty antso an-telefaona nifanaovan'ny Global Voices tamin'i Patrice Cox-Neaves, mpampianatra mozika, no nanamarihany fa ny fitaovana rehetra — anisan'izany ny feo – dia samy manana ny kalitao mampiavaka azy manokana izay matetika volavolain'ny fiakarana an-tsehatra. Nitandrina fatratra izy namoaka fehinkevitra hoe tokony hifanaraka tsara amin'ny feony voalohany ilay hiram-pirenena, satria maro ny fandikàna no lasa lavitra. Nanazava i Cox-Neaves fa tokony hiraina amin'ny gadona tsy miovaova ny “Islands of the blue Caribbean Sea” na “ny nosin'ny Ranomasina Karaibianina manga”, kanefa mahazatra ny mihataka kely amin'io, toy ny fampidirana fermata any amin'ny farany, izay tsy ampahany tamin'ilay famoronana tany am-boalohany.
“Zava-miaina ny mozika”, hoy i Cox-Neaves. “Raha nilaza mantsy ny Andriambavy fa tsy nanintona azy ny fomba nanaovana ilay hira, mety ho resaka hafa izany, fa afaka manamarina kosa aho anefa fa, matetika rehefa ny hiram-pirenentsika no lalaovina eo ambony takelaka vy, na lalaovina amin'ny karazana mozika hafa, dia alàna ny ‘Fahazoan-dalana artistika’.”
Na izany aza, nilaza i Chantal Esdelle, mpitendry mozika sady mpampianatra, izay nifampiresaka koa tamin'ny Global Voices tamin'ny telefaona fa tsy resaka fanodinana feonkira ilay izy ary ny fomba nihiran'i Danielle Williams ny andalana voalohany (na dia nataony tsara aza izany tamin'ny fanindroany “) no nandiso tanteraka ilay hiram-pirenena”.
Naverin'ireo mpandinika tsy mpiangaly mozika toa an'i Rose-Marie Lemessy-Forde ihany koa io fomba fijery io, izay niteny tao anaty fifanakalozan-dresaka tao amin'ny Facebook (nahazoana alalàna ny famoahana azy eto ), manao hoe :
Tena miombon-kevitra amin'ilay filoham-pirenena aho. Raha heverina ho tsy voaravaka mahafinaritra amin'izao ilay hiram-pirenena, dia aoka hajaina. Raha vao nanomboka nihira izy, ny eritreritro avy hatrany dia hoe : “an'iza izany hiram-pirenena hirainy izany ? 🤔”. Mahafinaritra ny feony, tsy nila nanao an'iny fampidirana iny akory izy hanatavezana ilay hiram-pirenena. Nanimba tanteraka an'ilay fiakarana an-tsehatra ilay izy.
Raha nanararaotra nanohitra ireo endrika hafa amin'ny fomba fitendry azy iny ihany koa ireo mpaneho hevitra sasany, namintina ilay adihevitra manontolo kosa i Patrice Cox-Neaves tamin'ny filazany fa : “Tsy afaka mijery ny tena votoatin-dresaka momba ny mozika isika satria tena zavatra manokana toa antsika tsirairay avy ihany izy.”